.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ထူးအိမ်သင် - ချစ်ခြင်းအားဖြင့် Album
ထူးအိမ်သင် - ချစ်ခြင်းအားဖြင့် Album
အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ တုနှိုင်းမဲ့ရတနာ ဆိုတဲ့ မိဘမေတ္တာဖွဲ့ သီချင်းလေးကိုတော့ တော်တော်များများပဲ
နားထောင်ဖူးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် Album ထဲကပါ။ ဒါ့ကြောင့်
အဲဒီ Album ထဲက တစ်ခြားသီချင်းတွေကိုရော သူငယ်ချင်းတွေ နားထောင်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
1 ကြယ်တွေစုံတဲ့ည Click Here !! 2.00 MB
2 တုနှိုင်းမဲ့ရတနာ Click Here !! 2.00 MB
3 အလင်းဆိုင်ရဲ့သီချင်း Click Here !! 2.00 MB
4 ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ် Click Here !! 1.70 MB
5 ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်း Click Here !! 2.10 MB
6 လူနဲ့အင်္ကျီ Click Here !! 1.40 MB
7 မိုးတိမ်ပြဇာတ် Click Here !! 2.00 MB
8 ဝေဒနာ Click Here !! 1.70 MB
9 ဟောင်းနွမ်းခဲ့သောနေ့ရက်လေးများ Click Here !! 2.40 MB
10 နောက်ဆုံးသီချင်း Click Here !! 1.90 MB
11 ငါတရားစီရင်တော်မူခန်း Click Here !! 2.10 MB
12 နှုတ်ဆက်တေး Click Here !! 1.80 MB
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော့်ဆိုဒ်က Mp3 သီချင်းဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 02:56